Marseille Oo Heshiis La Gaartay Lopez Iyo Ünder – Garsoore Sports
Marseille Oo Heshiis…
Marseille Oo Heshiis La Gaartay Lopez Iyo Ünder
Kooxda Marseille ee dalka Faransiiska ayaa heshiis la gaartay 2 xiddig oo ka tirsan kooxda Roma ee dalka Talyaaniga si ay safkeeda ugu xoojiso.
Suxufiga Sky Sport Angelo Mangiante ayaa soo wariyay in goolahaya reer Spain ee Pau Lopez laga doonayo magaalada Marseille ee dalka Faransiiska, wuxuu ugu wareegayaa heshiis amaah ah oo ay dheertahay iqtiyaari ah in ay si toos ah ula wareegi karaan. Ikhtiyaariga ay kula wareegayaan ayaa lagu sheegay adduun lacageed gaaraya 15 milyan oo yuuro.
Sidoo kale cayaarayahanka reer Turki ee Cengis Ünder ayaa saaxiibkii Lopez kula biiri doona kooxda Faransiiska ah heshiisyo isku mid ah. Weeraryahanka Ünder ayaa isna ay Marseilli ku iibsan kartaa adduun lacageed gaaraya 12 milyan oo yuuro marka uu amaahdiisa dhammeeysto.
Iyadoo madaxa suuqa kala iibsiga kooxda Roma, Tiago Pinto, uu heshiisyo la gaaray labadan xiddig, wuxuu haatan diiradda saari doonaa inuu dhammeeyo heshiiska ay kooxda kula saxiixaneyso ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Granit Xhaka oo mudddooyinkii ugu dambeeyay si aad ah loola xiriirinayay.
Paul Pogba Oo Dib Ugu Laabanaya Juventus